Politika fandefasana - JOOPZY
Haingana! Kaody coupon: "cybermonday2020"
Fiantohana fahafaham-po mandritra ny 30 andro amin'ny famerenam-bola Raha tsy afa-po amin'ny vokatrao izahay dia hamerina vola feno, tsy misy fanontaniana apetraka.
Tamin'ny fomba mahomby 28.775 no nalefa Nahazo ny mpanjifa faly be izahay ary maro ireo baiko nalefanay. Mila asiana fianakavianay lehibe fotsiny ianao.
Ny baiko rehetra rehetra dia esorina avy any Chine. Nahazo ny mpanjifa faly be izahay ary maro ireo baiko nalefanay. Mila asiana fianakavianay lehibe fotsiny ianao.
Nandeha tany amin'ny ankamaroan'ny firenena manerantany isika, ho an'ny fonosana rehetra an-trano sy iraisam-pirenena. Na eo am-piezahantsika ny manatitra entana amin'ny fotoana voafaritray, tsy afaka manome antoka isika na hanaiky ny tompon'andraikitra amin'ny fanaterana ivelan'ny vanim-potoana. Rehefa miantehitra amin'ny orinasam-pandefasan'ny mpiasan'ny antoko fahatelo izahay mba hanamorana ny fandefasanay ny mpanjifa ho anay, tsy afaka manaiky ny tompon'andraikitra amin'ny vola mivoaka am-paosiny na vidin-javatra hafa isika noho ny fandefasana tsy nahomby na tara na tara.
Ireo baiko rehetra dia handray tombanana 3-5 miasa andro mandrindra. Ny fotoana fandefasana anay matetika dia ao anatin'ny 7-10 miasa andro ho any Etazonia, ary 12-15 miasa andro ho any amin'ny firenen-kafa. Na izany aza, mety maharitra 20 andro ny andro hahatongavan'ny miankina amin'ny toerana misy anao ary haharitra hafiriana handehanana amin'ny fomba amam-panao. Tsara homarihina fa miovaova ny fotoana fandefasana mandritra ny fialantsasatra na ny fanontana edisiona voafetra.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny fandefasana izay voakasiky ny fadin-tseranana, ny fisehoan-javatra voajanahary isika, ny famindrana avy any USPS mankany amin'ny mpitatitra eo an-toerana ao amin'ny firenenao na fitokonana na fanemorana ny fitaterana an-habakabaka na an-tanety, na ny sarany fanampiny, ny fadin-tseranana na ny fiampangana any aoriana.
ZAVA-DEHIBE: Ny baikonay rehetra dia esorina avy any Chine ary tsy mandray andraikitra amin'ny aretina isan-karazany izahay.
mariho 1: Izahay dia tsy tompon'andraikitra raha toa ka tsy azo alaina fonosana ny fonosana iray satria ny fampahalalana tsy misy na tsy marina na tsy mandeha. Ampidiro azafady ny antsipiriany momba ny fandefasana rehefa mijery. Raha tsapanao fa nanao hadisoana ianao tamin'ny antsipirian'ny fandefasanao, alefaso tsara izahay handefa mailaka anay [email voaaro] faran'izay haingana.
mariho 2 : Ny firenena tsirairay dia misy am-baravarana hetra: ny habetsahan'ny fanombanan'ny olona mandoa hetra amin'ny entana fanafarana. Miovaova ny hetra sy ny vola isaky ny entana eto amin'ny firenena ary tokony haloa ho an'ny mpanjifa izany.
MISY fiovana amin'ny ORINASA
Ireo mpividy dia navela hanao fanovana amin'ny baiko napetraka, within 24 ora ny fanaovana ny fividianany sy alohan'ny ny didy dia tanteraka. Fiampangana fanampiny dia ho tambin'ireo mpividy amin'ny fanovana natao amin'ny baiko rehefa 24 ora ny fanaovana ny fividianany.
Ireo mpividy dia tsy navela hanafoana ny fividianana azy ireo aorian'ny apetraka ny baiko.
Tsy maintsy mangataka fiverenanao ianao 14 andro nandraisana ny baikonao.
Ny fomba hamerenana entana iray:
1. Azo antoka fa mahafeno ny fepetra ilaina amin'ny fiverenan'ny tena izy
2. Mandefasa hafatra aminay [email voaaro] manondro ny finiavana hamerina ilay entana. Azafady ampidiro amin'ny mailaka ireto manaraka ireto:
• Saripika / horonan-tsary amin'ilay zavatra miankina amin'ny entana
• Ireo marika sy marika napetraka
Hamaly anao amin'ny andro fandraharahana izahay 24 ora ary manampy anao amin'ny fanodinana ny fiverenan'ny entana novidina.
Raha ekena ny fangatahanao dia tokony averinao ao anaty ireo zavatra (s) 7 andro.
• Azafady mba alao antoka fa raha miverina vokatra ianao, dia tokony ho salama tsara, tsy ampiasaina, tsy voasasa ary miaraka amin'ny azy ireo fonosana tany am-boalohany (raha ilaina)
• Ny mpividy dia tompon'andraikitra amin'ny vidin'ny fandefasana entana
• Tsy haverina ny sarany fandefasana entana
Raha vantany vao azontsika ny fepetra arak'asa, dia haverinay aminao ny vidin'ny fividianana ary ampahafantarinay anao amin'ny mailaka.
FAMPISORONANA FIVAROTANA AZONY
Ny fiverenanao dia afaka mahazo fankatoavana miorina amin'ireto antony manaraka ireto:
Ny antony kendrena simba Simba ny vokatra amin'ny fandefasana
tsininy Ny vokatra dia tsy mandeha araka ny voafaritry ny sahan'ny mpanamboatra azy
Zavatra tsy mety / diso Tsy ny vokatra nasain'ny mpanjifa (ohatra ny habe diso na loko diso)
Zavatra tsy ampy / ampahany Zavatra / singa tsy hita ao anaty fonosana
Tsy mety * Ny mpanjifa iray dia mandray ny haben'ny nasaina fa tsy mety izany *
Hadisoana amin'ny tranokala Ny vokatra dia tsy mifanentana amin'ny famaritana tranokala, famaritana ary sary (ity olana ity dia azo avy amin'ny fahadisoana eo amin'ny tranokala / diso)
FIVERENANA & valiny
ANDRIAMANITRA DIA FIVORIANA VOLA ANDROANA
Joopzy.com manome antoka fa hisy zavatra novidina tamintsika averina ao anatiny 7 andro fiatrehana, antoka averina-famerenam-bola.
Raha toa ianao ka afaka mahazo famerenam-bola mifanaraka amin'ny antony averina etsy ambony, dia afaka mangataka famerenam-bola ao amin'ny “Ny kaontiko> kaomandy”Na azonao ampiasaina ilay rohy omena etsy ambany:
Misafidiana entana iray na ny baiko iray manontolo ary kitiho ny "famerenana ny fangatahana”Bokotra. Ampahafantaro anay fa mila famerenam-bola ianao, miaraka amin'ny fanazavana mazava ny antony tsy fahafaham-ponao amin'ny fandefasana sy mampakatra sary na fitaovana hafa manohana. Tianay ho fantatra ny toerana tsy nety na ny fomba hanatsarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa sy ny fiainana traikefa. Ny olana tsirairay dia hadihadiana ao anatiny 1-2 andron'ny asa. Vokatr'izany dia hahazo mailaka ny mpanjifa, raha mendrika ny famerenam-bola ny mpanjifa, dia hitranga ny famerenam-bola arakaraka ny politikam-bola tambin-tsoa eto ambany.
TAMIN’ASA FOTOANA HAROHO NY FANDROSOANA / FINOANA AZY
Safidy fanoloana: rehefa vantany vao nisedra ny fizahana ny fanombanana ny kalitao, manantena fa hahazo ilay zavatra ao anatiny 10-15 andro fandraharahana hatramin'ny daty raisinay ny fampahalalana an-kianjan'ny entana niverina.
Safidy famerenana: ny mpanjifa nangataka ny famerenam-bola dia afaka manantena ny handray izany ao anatin'ireo fe-potoana manaraka:
Fomba fandoavam-bola (amin'ny fotoana fividianana) Safidy indray Refund Lead Time (hahitanao ny haben'ny ao amin'ny banky anao)
Carte de crédit / carte de debit Famerenana trosa / fandoavana trosa
Paypal Famerenan'ny Paypal (raha misy ny fifandanjan'ny Paypal) 5-7 andro fiasana
Famerenana amin'ny fangatahana vola (raha mifandray amin'ny carte de crédit ianao) 5 ka hatramin'ny 15 banking
Fanamarihana: Ny habetsaka dia hita taratra ao amin'ny fiandohan'ny volanao
Famerenana amin'ny trosa (raha mifandray amin'ny carte de debit) ny Paypal 5 hatramin'ny 30 andro fitadiavam-bola (Miankina amin'ny banky famoahana anao)